I-Amazon ivuselela isilawuli sezwi se-Alexa futhi sayivivinya | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 30/07/2021 10:00 | Izesekeli, Gadgets, General, Izibuyekezo
Inkampani kaJeff Bezos iyaqhubeka nokwenza intando yeningi nokubusa emkhakheni we-smart TV, ngaleyo ndlela ivuselela njalo ikhathalogi yayo yemikhiqizo yokuzijabulisa. Lapha sihlaziye konke okwehlukile kwezomnotho I-Amazon Fire Stick TV futhi yi-Cube ye-Amazon Fire TV egabadelayo.
I-Alexa Voice Remote (i-3rd Generation) entsha yakwa-Amazon ikhishwe ngoshintsho oluncane lokuklama futhi sayivivinya kahle. Funda nathi ukuthi izinguquko kulayini entsha ye-Amazon ziqukethe ini nokuthi ungasithuthukisa kanjani isipiliyoni sakho nge-Fire TV sibonga kule nsiza encane kodwa ethokozisayo.
1 Ukulungiswa kanye nezinkinobho eziningi
Ukulungiswa kanye nezinkinobho eziningi
Kokubili ngesisindo nobukhulu umyalo uhlala ungacabangi, Ngaphandle kwalokhu, yehliswe ngesentimitha ubude, ngaphambi kokuthi sibe no-15,1 cm kulawulo lwendabuko ngenkathi ulawulo olusha luhlala ngamasentimitha ayi-14,2 ubude. Ububanzi buhlala bunjalo ngamasentimitha angu-3,8 esewonke, futhi ukushuba kuncipha kancane kusuka ku-1,7 amasentimitha kuya ku-1,6 centimeters. Umyalo omusha manje usuyatholakala ku-Amazon ngentengo yama-euro angama-29,99.
Siqala ngengxenye engenhla, lapho ukuhlelwa kwenkinobho yamandla, imbobo yemakrofoni kanye nenkomba yesimo i-LED igcinwa khona. Ishintsha inkinobho yokuncenga i-Alexa, okuthi yize igcina ukulingana manje iluhlaza okwesibhakabhaka futhi ifaka ilogo yomsizi we-Amazon, ehlukile emfanekisweni wombhobho owukhombisile kuze kube manje.
Izengezo ezine eziphawuleka kakhulu ezengxenye engezansi, lapho sithola khona izinkinobho ezinikele, ezimibalabala kanye nosayizi omkhulu we Finyelela ngokushesha: I-Amazon Prime Video, iNetflix, iDisney + ne-Amazon Music ngokulandelana. Lezi zinkinobho azilungiseki nakancane okwamanje.
Kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, umyalo omusha wokulawula izwi wesizukulwane sesithathu wethule lo nyaka ngo-2021 iyahambisana neningi lemikhiqizo esebenzisa i-Amazon Fire TV: I-Fire TV Stick Lite, i-Fire TV Stick (isizukulwane sesi-2 nangemva kwalokho), i-Fire TV Stick 4K, i-Fire TV Cube (isizukulwane sokuqala nangemva kwalokho), ne-Amazon Fire TV (isizukulwane sesi-1. Ngeshwa, ayisekeli isizukulwane sokuqala nesesibili se i-Fire TV yendabuko, noma isizukulwane sokuqala seFire TV Stick.
Thenga kude nge-Amazon Fire TV
Igcina ukuhambisana okuphezulu nethelevishini nemigoqo yemisindo. Njengoba bekulokhu kwenzeka kuze kube manje, okunye kokuheha okukhulu kokuvuselelwa kwayo ngokunembile ukuthi singakwazi ukukhipha ukulawula kwendabuko kwethelevishini ukuze sikuphathe futhi ngaleyo ndlela sigweme ukuba nabalawuli yonke indawo.
Irimothi isebenza ngamabhethri amabili we-AAA, afakiwe kuphakheji. Ukuxhuma, ngaphezu kohlelo lwe-infrared olusebenza kuze kube manje, kusekelwe kunguqulo ye-Bluetooth esingayazi njengamanje. Mayelana nokuzimela, I-Amazon ayinikanga nosuku oluthile lwempilo yamabhethri, kepha lokhu kuzoncika kakhulu ekusebenziseni esikunike kona. Uma isebenza njengesibonelo, bengisebenzisa i-Amazon Fire Stick TV selokhu yethulwa eSpain futhi okwamanje amabhethri kusengawokuqala.
Umyalo, Ngaphandle kokulungiswa kwayo ezingeni lokuklama, ayikakutholi ukwanda kwamanani, sise-29,99 euros, okuyikho impela okubiza umyalo wesizukulwane esedlule. Vele, kubiza ama-euro ayi-10 kuphela ngaphansi kweFire TV Stick, okubandakanya irimothi, isinqumo esinzima yize uzokonga ama-euro ambalwa uma ulahlekelwe noma wephuli irimothi kuphela. Manje isiyatholakala ngokuphelele ku-Amazon.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Amazon ivuselela isilawuli sezwi se-Alexa futhi sayivivinya